I-AMP plug-in enomsebenzi wohlu bukhoma we-AMP - ZU
flash_auto Dala amakhasi e-AMP
extension Shumeka umaka we-AMP Brightcove
I-plug-in ye-AMP enohlu olubukhoma lwe-AMP
(Kwenziwe kwasebenza okwesikhashana !!)
Ijeneretha ye-Accelerated-Mobile-Pages (AMP) yokudala amakhasi e-Google AMP , ama- plugin e-AMP kanye nomshini womaka we- AMPHTML zisebenzisa umsebenzi wohlu olubukhoma lwe-AMP futhi zenze kusebenze ngokuzenzakalelayo isibuyekezo sedatha ebukhoma ohlangothini ngalunye lwe-AMP olukhiqiziwe.
<amp-live-list> -Tag ukuhlanganiswa
I-Accelerated Mobile Pages Generator idala ngokuzenzakalela inguqulo ye-AMP ngomsebenzi wokuvuselela i-athikili isebenzisa umaki we- <amp-live-list>. Ngale ndlela, wonke amasayithi e-AMP anohlobo lomsebenzi webhulogi obukhoma.
Uma umsebenzisi ebheka inguqulo ye-AMP yewebhusayithi futhi kunezici ezintsha zaleli khasi le-AMP okwamanje, ikhasi le-AMP liyabona ukuthi inguqulo entsha, esesikhathini iyatholakala.
Ikhasi le-AMP lazisa umsebenzisi ngesibuyekezo esikhona se-athikili ngenkathi efunda, ngaphandle kokuthi umsebenzisi aphinde alayishe ikhasi le-AMP!
Inkinobho iboniswa kumsebenzisi ngale njongo. Uma umsebenzisi achofoza inkinobho yokuvuselela i-AMP, inguqulo entsha ye-AMP ilayisha ngokushesha ngejubane le-AMP elijwayelekile! Lokhu kunika amandla izikhathi ezimfushane zokulayisha kunokulayisha kabusha okuphelele futhi kuhlala kugcina umsebenzisi esesikhathini. Isibonelo, ama-tick bukhoma anganikwa amandla nge-AMP.
I-Accelerated Mobile Pages Generator idala ikhasi le-AMP elithumela isicelo kuseva yekhasi le-AMP (isb. Iseva ye-Google) njalo ngemizuzwana engu-16 bese ihlola ukuthi inguqulo ye-athikili entsha iyatholakala yini. Uma ngabe kukhona inguqulo ye-athikili entsha, ikhasi le-AMP likhombisa umsebenzisi isaziso sokuvuselela i-AMP ngendlela yenkinobho yokubuyekeza i-athikili.